Deg Deg:Dacwad Laga Gudbiyay Maamulka Somaliland, – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Dacwad Laga Gudbiyay Maamulka Somaliland,
Kooxda la’adagaallanka Burcad-badeedda xeebaha Soomaaliya ee loo yaqaanno CGPCS, ayaa si adag xukuumadda Somaliland ugu cambaaraysay, siidaynta 19 Burcad-badeed ah oo aan weli dhammaysan xukunnii lagu riday.
Qoraal ka soo baxay kooxda CGPCS, ayaa lagu sheegay in go’aan Somaliland ku sii daysay maxaabiista Burcad-badeedda ah, uu si cad u curyaaminayo dagaalka midaysan ee Beesha Caalamku mudada 10 sano ah kula jirtay Qawlaysatada Xeebaha, dagaalkaasi oo keenay hoos u dhaca ballaaran ee ku yimid Burcad-badeeddii Xeebaha Soomaaliya.
CGPCS Waxay caddaysay in bishii September ee sannadkii 2018-kii, ay soo saartay qoraal ay Somaliland kaga dalbanayso in aan la sii dayn, maxaabiista xukuman ee Burcad-badeednimada ugu xiran Hargeysa, si aysan u dhiirri-gelin falalka Burcad-badeednimada.
Sidoo kale, Kooxdu waxay sheegtay in sii daynta maxaabiista, ay gebi ahaanba burinayso heshiiskii Is-afgaradka ahaa ee dowladda Seychelles ay Somaliland ugu wareejisay maxaabiista.
Waxaa kale oo ay kooxdu sheegtay, in xukunka lagu riday Burcad-badeedda aan waxba laga beddeli karin, ilaa ay ka heshiiyaan dhammaan dhinacyada ku midaysan la’dagaallanka Burcad-badeedda.
Ugu dambeyntii Kooxda CGPCS, waxay Somaliland ku dacwaysay Golaha Amniga Qaramada Midoobay oo ay ka dalbatay in uu tallaabada ugu habboon ka qaado maamulka Somaliland.
Previous Post: Sir Culus::Afar Qolo oo ka midaysan in Kismaayo dagaal ka dhaco
Next Post: War Deg Deg Ah:Ciidanka Qaranka Oo La Wareegay Degmo Caan AH.